Ndozi Top Social Media nke 2013 | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 17, 2013 Monday, December 16, 2013 Douglas Karr
Ndị ọrụ rogue, ndokwa tweets, akaụntụ hacked, akụkọ banyere ha na ọdachi, ịkpa oke agbụrụ, na hashtags ejirila… ọ bụ afọ ọzọ na-atọ ụtọ maka mmejọ mgbasa ozi mmekọrịta. Ndị ụlọ ọrụ ndị tara ahụhụ site na ọdachi ndị a bụ nnukwu na obere… mana ọ dị mkpa ịgbakwunye na enwere ike iweghachi mmejọ mgbasa ozi mmekọrịta ọ bụla. Amaghị m ihe ọ bụla merenụ nwere mmetụta na-adịgide adịgide na ụlọ ọrụ ya mere ndị ahịa ụlọ ọrụ, ọ bụ ezie na ihere emeghị, ekwesịghị ịtụ egwu mmetụta na-adịgide adịgide.
Anyị bi n'ime ụwa ebe ndị na-azụ ahịa na-ewekarị iwe ma nwee mmasị ịmali elu na ohere ịme ụlọ ọrụ ihere. Ndị ụlọ ọrụ anaghị enwe aha na enweghị ihu - n'ụzọ na - enweghị isi - ihe soshal midia nwere ike idozi n'ụzọ dị mfe. Oge na-aga, anyị na-ahụ ụlọ ọrụ ndị na-ata ahụhụ ntakịrị mmejọ nwere ezigbo mmadụ, ezigbo onyoonyo na ezigbo aha n'ihu ụlọ ọrụ ha. O yikarịrị ka ndị mmadụ agaghị awakpo ezigbo onye ọ bụla ga-enyere aka karịa njirimara na ọnụahịa ngwaahịa!
The Nna-ukwu na Guide Guide tinye a fun infographic ọnụ. Atụla egwu, ndị ahịa… mana gbalịa ka ị ghara imehie ihe ndị a, ma.
Tags: amy si eme ụlọ ọrụburger ezeChụwana-akpachapụ anyahacked akaụntụjidere hashtagshmvebe obibijp morgan chụrụKmarthacking akụkọenweghị uche agbụrụNdị ọrụ ọjọọndokwa tweetselekọta mmadụ mgbasa ozi ọdịdaemehie ihe mgbasa ozirhino nke osisi spearminttescoyabasịọdachi